Ftschọ Mma Crafts
Okpokoro taịl nile
Isiokwu cochọ Mma
3 * 6 inch Taịl
6 * 6 inch Taịl
Handpainted Efere Ji achọ Art Ngidi
Ejiri Wera Taịlị Mgbidi Ejiri mee 6 × 6
Nkọwapụta: 1. Ọma seramiiki taịl 2. Otutu nha, dị iche iche aghụghọ 3. Ezi mma, asọmpi price 4. MOQ: 50pcs maka otu imewe 5. Lead oge: 35days 6. OEM na-anakwere Ikwado ndị artwork aka aka na taịl nile pensụl dị nro wee jiri aka ya wee gbaa ya ọkụ na oke ọkụ dị elu iji hụ na ọ kachasị mma ma nwekwuo ederede ma na-enwu gbaa karịa usoro ahụ. Ngwaahịa anyị na-eweta enweghị atụ na ịke na-enweghị atụ na gburugburu ebe obibi na ọfịs ...
Mgbidi mgbidi anyị site na iji usoro seramiiki na ọrụ imepụta nke sitere na zenith nke alaeze ukwu China, a na-eme ka taịl ndị na-egbuke egbuke dị ka ọrụ ahaziri iche. A na-eji taịl ahụ eme ihe n'ọtụtụ ebe ugbu a n'ọtụtụ ebe, dịka ọkụ, ime ụlọ ịwụ, kichin, ebe igwu mmiri na ime ụlọ. Ha bụ ezigbo ụlọ ịchọ mma maka ụlọ na ọfịs gị. Nkọwapụta Ngwaahịa Zuru ezu N'ihi aka ha na-ese ihe okike, ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ mmezighị emezi, mgbape, ma ọ bụ ndo variati ...
Mbadamba tebụl anyị ji achọ mma bụ ejiri aka ya mee ihe site na iji usoro seramiiki na ọrụ imepụta nke si na zenith nke alaeze ukwu China, a na-eme ka taịl ndị a kpụrụ akpụ bụrụ ọrụ ahaziri iche. Ha na-eweta ịdịke na-enweghị atụ na ụdị obibi gburugburu na ọfịs maka imepụta ndụ mara mma. Iji ngwaahịa Ejiji, ị ga-ahụ echiche na mmụọ iji nyere aka chọọ mma ma nwee ọ entertainụ nke ọma. Atụmatụ 1. Aka-ese, glazed na n'ekwú ọkụ chụọ n'ọrụ seramiiki ji achọ a ...
Nkọwa 1.Fine seramiiki tile 2.Multi nha, ụdị dị iche iche 3.Ezigbo ego na oke mma 4.MOQ: 60pcs maka otu imewe 5.Ọgụgụ oge: 20-35days Anyị nwere ọtụtụ aghụghọ maka nhọrọ gị. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere taịl nile anyị. Taịl nile anyị bụ ejiri mee. Zụ ndị taịl nile ndị a kwụrụ maka mfe nghọta! Nke a ga-abụ onyinye zuru oke maka onye hụrụ nka n'anya, onye nwe ụlọ mmanya, enyi, onye ezinụlọ, ma ọ bụ debe ya maka onwe gị! Nke a mural ga-eme nnukwu mgbakwunye na ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ...
Ceramic Ji achọ taịl Bkè
N'ihi ọgbụgba ahụ nwayọ na usoro jụrụ oyi nke usoro ahụ, ngwaahịa ha nwere ike ibute ìhè anyanwụ, mmiri, ntụpọ, ikpo ọkụ, na agba ga-adị otu. Ogologo oge a dị elu na-eme ka ha dị mma maka ngwa dịka hotplates yana ime ụlọ na ngosipụta n'èzí. Zingtụnanya ejiri rụọ Taịl ejiri Aka Mepụta Ebube Ekike. Ejirila taịl nile kemgbe ọtụtụ narị afọ iji mepụta ala na mgbidi dị mgbagwoju anya. Enwere ike ịhazi taịlị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị njedebe iji mepụta ụkpụrụ pụrụ iche ...
Anyị nwere atụmatụ dị iche iche maka ịhọrọ gị. Anyị nwekwara ike ịcha nka gị na taịl ahụ. Na OEM ọrụ dị. Ihe ndọta dị n'azụ ya nwere ike ịdakwasị ihe ọ bụla nwere ike ịnweta na bọọdụ magnet. Dị ka ọla kọchara ọnụ ụzọ friji, ihe mkpuchi ígwè, mkpuchi dị iche iche, oven, ọfịs ịgba akwụkwọ, ibo ụzọ nche, bọọdụ magnetik, ogwe ọcha magnet, bọọdụ eserese nke ụmụaka, wdg. a ga-etinye aka na iwe g ...
Seramiiki Coster Ngidi 4 × 4
Ejiri aka anyị mee nke ọma bụ ihe mgbakwunye zuru oke maka iri nri gị. Odi ka okwesiri iji chebe tebulu a na-ese ya site na aka ma na-edozi ya karia uzo. Ndị ala anyị ga-abụ onyinye pụrụ iche pụrụ iche maka ime ụlọ, ụbọchị ọmụmụ na mmemme ndị ọzọ… ma ọ bụ naanị iji gosipụta etu ị si eche banyere ndị ị hụrụ n'anya! You nwere ike iji ha dị ka tea coasters, agbamakwụkwọ coasters, table decors… Ha ga-e mere naanị gị! Main mmepụta usoro All wor ...
MBA. 402 HEPING WEST ROAD, SHIJIAZHUANG, Mpaghara HEBEI, CHINA